Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Inkxaso karhulumente ibalulekile kwiinjongo ezintsha zokungathathi hlangothi kwekhabhoni
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Xanduva • News Sustainability • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Inkxaso karhulumente ibalulekile kwiinjongo ezintsha zokungathathi hlangothi kwekhabhoni.
Oorhulumente kwihlabathi liphela baxinzelela ekujoliseni ekunciphiseni icarbon enkulu. Nangona kunjalo, ukunqongophala kwezicwangciso ezibambekayo malunga nokuba oku kuya kuphunyezwa njani okanye inkxaso-mali ekhoyo kuyabonakala.
Ukungabikho kwenkxaso karhulumente kwiinqwelomoya kubonakala, kwaye utyalo-mali olukhulu luyafuneka.
Utyhalo lwase-UK lokufumana amazwe ukuba ajoyine i-'International Aviation Climate Ambition Coalition' ebhengezwe kwi-COP26 akwanelanga.
I-SAF iya kuba sisithuba esilungileyo sokumisa ukuhamba ngeenqwelomoya ukunciphisa ukukhutshwa kombane ngelixa iindlela zombane zexesha elide ziqwalaselwa.
Iinkampani zeenqwelomoya kunye neshishini lokuhamba ngenqwelomoya elibanzi liya kusokola ukuhlangabezana namabhongo okujoliswa kwekhabhoni yodwa. Oorhulumente kufuneka basebenze ngokubonelela ngotyalo-mali olubalulekileyo olulandelayo COP26 ukuqinisekisa ukuba isenzo esinentsingiselo siyenzeka.
COP26 ibeke uxinzelelo kushishino lwezophapho ukuze luqinisekise ukuzibophelela kwalo ekunciphiseni impembelelo yalo kwindalo esingqongileyo. Kutshanje kufumaniseke ukuba i-45% yabaphenduli behlabathi bathe imo engqongileyo yeyona nto ibalulekileyo kwimiba yokusiNgqongileyo, iNtlalo, kunye noLawulo (ESG) ngokubhekiselele kwizinto eziphathekayo.
Ngokuxhalaba kokusingqongileyo kubaluleke kakhulu kubathengi, ishishini kufuneka lisebenze. Nangona amacebo amaninzi, amaqela asebenzayo, kunye nezibhengezo zibhengezwe ukuba zikhokele kwinkomfa ye-COP26, ayizukwanela iyodwa ukunciphisa izinto ezikhutshwa kushishino nokudala utshintsho olunentsingiselo. Ukungabikho kwenkxaso karhulumente kwiinqwelomoya kuyabonakala, kwaye utyalo-mali luyafuneka.
Oorhulumente baye baxhasa iphulo lamanye amacandelo lokuba angasingqongileyo. Ngokomzekelo, abavelisi bezithuthi baye bafumana inkxaso ebanzi kunye nezikhuthazo zokutshintshela kwimveliso yemoto yombane, kodwa imboni yezomoya ayizange ifumane ingqwalasela efanayo okanye utyalo-mali.
Oorhulumente kwihlabathi liphela baxinzelela ekujoliseni ekunciphiseni icarbon enkulu. Nangona kunjalo, ukunqongophala kwezicwangciso ezibambekayo malunga nokuba oku kuya kuphunyezwa njani okanye inkxaso-mali ekhoyo kuyabonakala. I UKUkutyhalela phambili ukwenza amazwe ajoyine i-'International Aviation Climate Ambition Coalition' ebhengezwe kwi-COP26 akwanelanga.